နိုဝင်ဘာလကျောက်ဆောင်များ၏စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ | slot Fruity £5+ £ 500 အခမဲ့! နိုဝင်ဘာလကျောက်ဆောင်များ၏စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ | slot Fruity £5+ £ 500 အခမဲ့!
1.အဆိုပါငွေသားဆု€ 25,000 တန်ဖိုးရှိဖြစ်ကြပြီးအကြားမျှဝေပါလိမ့်မည် 100 ဆုရရှိသူ (€ 2,000 ပါဝင်သည့် 1st ဆုချီးမြှင့်ငွေဖြုန်း).
2.ကျနော်တို့ကိုသူတို့အောင်မြင်လျှင်မည်သည့်အနိုင်ရကစားသမားအကြောင်းကြားနှင့် player အကောင့်မှငွေသားဆုချီးမြှင့်ပေးချေမည်.
101- 200: 100 အခမဲ့လှည့်ဖျား
201 - 1000: 50 အခမဲ့လှည့်ဖျား
1001 - 3000: 20 အခမဲ့လှည့်ဖျား
3001 - 5000: 10 အခမဲ့လှည့်ဖျား
110,000 အခမဲ့လှည့်ဖျားကြား shared လိမ့်မည် 4900 ဆုရရှိသူ.
အခမဲ့ဆု Guns N Roses ဗီဒီယို slot အပေါ်တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်း Spins ™, လူးစ Hendrix အွန်လိုင်းပေါက်™, ဒါဟာ™Motörheadဗီဒီယိုပေါက်အခြေစစ်ပွဲများအတွက်အခမဲ့လှည့်ဖျားနှင့်အတူတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အကြွေးဝယ်ကစားသမားအကောင့်မှလောင်းကစားရုံရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပြီးကစားသမားတွေအနိုင်ရ.
ဆုရရှိသူသူတို့ရဲ့အခမဲ့လှည့်ခြင်းများပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ကြကြောင်းအကြောင်းကြားစာနှင့်အတူ e-mail, သို့မဟုတ် SMS ကနေတဆင့်အကြောင်းကြားပါလိမ့်မည်.
အနိုင်ရရှိမှုကစားသမားအတွင်း login ရမယ် 5-7 ဆုကြေးငွေအစီအစဉ် activated ခဲ့ပြီးနောက်ရက်ပတ်လုံး.
တစ်ခုချင်းစီကိုကစားသမားအနည်းဆုံးကစားရမည်ဖြစ်သည် 50 စစ်မှန်သော-ငွေခြေစစ်ပွဲဂိမ်းမဆိုအပေါ် spins (နိမ့်ဆုံး€ / £ / Kr / $ 10) - Guns N Roses ဗီဒီယို slot ™, လူးစ Hendrix အွန်လိုင်းပေါက်™နှင့် / သို့မဟုတ်Motörheadဗီဒီယိုပေါက်™ - လှည့်ဖျားနှုန်း€ 0,20 ၏နိမ့်ဆုံးနဲ့အမြှင့်တင်ရေးကာလအတွင်း. ခပ်သိမ်းသောအဘို့ 50 ကစားသမားဆုကိုမဲနှိုက်သို့တစ် entry ကိုလက်မှတ်ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည် spins. (max ကို. 50 ကစားသမားတစ်ဦးလျှင်လက်မှတ်, တစ်နေ့လျှင်).
ခြေစစ်ပွဲဂိမ်းတွေဟာ: Guns N Roses ဗီဒီယို slot ™, လူးစ Hendrix အွန်လိုင်းပေါက်™, Motörheadဗီဒီယိုပေါက်™
NetEnt ပြင်ဆင်ရန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်, မည်သည့်အချိန်တွင်မြှင့်တင်ရေးကိုရပ်ဆိုင်းသို့မဟုတ်ဖျက်သိမ်း.
စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ Jungle ဖျားနာ